#Talyaaniga ayaa seegaya Koobka Aduunka markii ugu horeysay tan iyo 1958-kii Xili Dalka Iswiidhan u soo baxay | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Talyaaniga ayaa seegaya Koobka Aduunka markii ugu horeysay tan iyo 1958-kii Xili...
#Talyaaniga ayaa seegaya Koobka Aduunka markii ugu horeysay tan iyo 1958-kii Xili Dalka Iswiidhan u soo baxay
Italy ayaa ku guuldareysatay inay u soo baxo Koobka Adduunka markii ugu horeysay tan iyo 1958, iyadoo Sweden ay xaqiijisatay booskeeda Russia ka dib markii ay barbaro 0-0 ay kula galeen galeen Isniintii magaladda Milan.
Sweden, ayaa usoo baxdey baxday Ciyaaraha aduunka tan iyo 2006dii, Is araga hore ee ciyaarta ayey 1-0 kaga badisay talyaaniga todobaadkii hore.
Talyaaniga, oo afar jeer ku guuleystay Koobka Adduunka, ayaa seegi doona.
Inkastoo ay ​​goolal la’aan ku kal dhaqaaqeen, ciyaarta waxaa ka buuxay xamaasad, iyadoo koox kasta laga diidday laba rigoore oo uu garsooraha reer Spain Antonio Mateu Lahoz qadacay.
Laakiin goolka maysan dhalin, waxaana jiri doono baaritaan ka bilaaban doonaa sababta ay ku timid guldaradda ka dib guuldaradii ugu weyneyd ee taariikhda kubadda cagta Talyaaniga ku dhawaad ​​60 sano soo marta. Jamaahirta Azzurri ayaa noqon doono kooxda hore heysata horyaalka koobka aduunka ee ku maqnaanaad doonta ciyaraha aduunka ee lagu qabanayo Russia xagaaga soo socda.
Natiijada ayaa sidoo kale waxaa ay u badan tahay inay soo afjarto xirfad ciyaareedka caalamiga ah ee gool hayaha Talyaaniga u dhashay ee Gianluigi Buffon, kaasoo ka tirsanaa xulka Talyaanigauu ciyaaray Ciyaaraha aduunka tan iyo 1998.